सभामूख र उपसभामूख बारे प्रचण्डको यस्तो जवाफ ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
सभामूख र उपसभामूख बारे प्रचण्डको यस्तो जवाफ !
के गर्ला प्रतिपक्ष ?
काठमाडौ, २९ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाका सभामूख र उपसभामूख अहिले कुनै पनि पार्टीमा नभएको बताएका छन् ।
कांग्रेसले एकै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख भएको भन्दै फेर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको बेला प्रचण्डले कुनै पनि पार्टीमा नरहेकाले फेर्न आवश्यक नरहेको बताए ।
आज परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली जेनेभा जाँदै
देउवा र पौडलबीचको विवाद उत्कर्षमा
सभापति देउवाले कड्किँदै भने, ‘कांग्रेस पार्टी कसैको बपौति होइन’